ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားဖြင့် လေထုချုံ့ခြင်း, လျှပ်စစ် အပူ, လောင်ကျွမ်းခြင်းအပူ,ပုံမှန်လေထုသည်ဖိအားမြင့်မားပြီးအပူချိန်မြင့်မားသောဓာတ်ငွေ့ဖြစ်လာသည် ဖြန့်ဝေနေသောပန်ကာဖြင့်ခြောက်သွေ့သောအခန်းသို့ပို့ဆောင်ပါ (20-85 ℃) ။ ပူနွေးသောလေကြောင်းဖြင့်အပူ, ခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းများအတွက်အစိုဓာတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည် ရေနွေးငွေ့နှင့်လေမှုတ်ခြင်းစနစ်သည်အစိုဓာတ်ကိုခွဲထုတ်လိမ့်မည်
အစားအစာအခြောက်ခံမီးဖိုအတွက် Food Grade Mesh Metal Trolley
ဤဗန်းများကို 201,304 နှင့် 316 stainless steel ကဲ့သို့သော stainless steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ စာရွက်သည် ဝါယာကြိုးဖြစ်သည်။ ကွက်အရွယ်အစားသည် 1.5*1.5mm၊3*3mm နှင့် 5.*5mm ဖြစ်နိုင်ပါသည်။Amd သံမဏိစာရွက်၏ mesh hole အရွယ်အစားနှင့် အထူကို လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။များသောအားဖြင့် mesh tray ၏ပစ္စည်းသည် stainless steel 304 ဖြစ်ပြီး food grade ဖြစ်သည်။ ကာဗွန်သံမဏိ၊ 316 သံမဏိစတီးလ်၊ သံဖြင့် ပန်းချီဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော အခြားပစ္စည်းအမျိုးအစားများသည် အထူးအသုံးချမှုတွင် အိုကေပါသည်။သတ္တုကွက်ဗန်း၏အရွယ်အစားသည် 800mmX600mm၊ 600mmX400mm၊ အမြင့် 20mm၊ 25mm သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍များနိုင်ပြီး အခြားအရွယ်အစားကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။သတ္တုဗန်းကို အသီးအနှံများ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း၊ သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ဆေးကြောခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း၊ အသားဖုတ်ခြင်း၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် အစားအစာ ဖုတ်ခြင်းအဖြစ် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။Stainless steel 304 mesh မီးဖုတ်ထားသော ဗန်းသည် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံနိုင်သည်၊ အပူချိန်မြင့်မားပြီး ဆေးကြောရလွယ်ကူသည်၊ အကြိမ်များစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
လက်ကားသံမဏိ mesh tray ပေးသွင်း& ထုတ်လုပ်သူ | Twesix
ဤရွေ့ကားကွက်ဗူးခွံကျယ်ပြန့်မီးဖိုခန်းခြောက်, အစားအစာခြောက်သွေ့စက်တွေအတွက်အသုံးပြုကြသည်, ကင်, မီးဖိုချောင်သုံး, စျေးဆိုင်များ, ဟိုတယ်များစသည်တို့ကိုအဆိုပါကုန်ကြမ်းသံမဏိ 201.304 နှင့်သံမဏိ 306.Adopting ဖြစ်ကြသည်ဗန်း Anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး, Anti-သံချေးနိုင်ပါတယ်နှင့် မြင့်မားတဲ့အပူချိန်သည်းခံကြ၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်စံအရွယ်အစား: 800 * 600mm, 600 * 400mm.It စသည်တို့ကို, ဝန်စွမ်းရည်, ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစား၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်
TSIX စိတ်ကြိုက်စီးပွားဖြစ်သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရေဓာတ်စက်စက်ရုံဈေးနှုန်း - DPHG150S-G
တရုတ်နိုင်ငံမှစက်ရုံစျေးနှုန်းနှင့်အတူ OEM သို့မဟုတ် ODM သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်စက်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်ခရမ်းချဉ်သီးခြောက်စက်၊ ကြက်သွန်ဖြူခြောက်သွေ့စက်နှင့်အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များအခြောက်ခံစက်ကိုပြသနိုင်သည်
Best Twesix Pork Jerky Drying Machine-DPHG050S-G Supplier
As one client from Thailand requires, we tested to dry pork jerky in our hot air dryerMeat: PorkThickness:slice5to 6mmTarget drying temperature:60 degree CDrying time: 3hoursCLEAN: friendly drying system that does not use much energy. The TWSIX Pet Food Drier is the perfect machine to keep your pet's food dry and fresh. This pet food dryer will keep your pet's food dry and fresh using its twin-fan drying mechanism.Easy to use ，easy to clean ， useful for pets with sensitive stomachs。 Original design， Two sided door. With the TWSIX pet food dryer, you can now dry your pet's food without having to stick it in the oven or microwave. The TWSIX pet food dryer isadurable, reliable and convenient way to safely dry pet food.
စက်မှုလယ်ယာအပူခန်းခြောက်စက်သည်အာရှ DPPG150s-G Tsix တွင်ရေပန်းစားသူ
ခြောက်သွေ့သောခေါက်ဆွဲ၏ခြောက်သွေ့သောအချိန်သည်ခြောက်သွေ့သောခေါက်ဆွဲအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အရေးကြီးသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးနာရီ3နာရီခွဲမပြည့်သင့်ပါ။ ခြောက်သွေ့သောအချိန်သည်တိုတောင်းသောကြောင့်ခေါက်ဆွဲများကို "အပြင်ဘက်တွင်ခြောက်သွေ့ပြီးအတွင်းပိုင်းစိုစွတ်သော" ကိုဖြစ်စေရန်လွယ်ကူပြီးအတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင်ကျုံ့စေပြီး Crisp ခေါက်ဆွဲများကိုပင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး Crisp ခေါက်ဆွဲများကိုပင်ကျုံ့စေပြီး, ခြောက်သွေ့သောအချိန်ကြာမြင့်စွာနေလျှင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျလိမ့်မည်။ ခြောက်သွေ့သောခေါက်ဆွဲများအတွက်ခြောက်သွေ့သောကိရိယာများကိုခြောက်သွေ့စေသောလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းခေါက်ဆွဲ၏လှုပ်ရှားမှုပုံစံအရခွဲခြားသည်။ ပုံသေနှင့်မိုဘိုင်းအမျိုးအစားများရှိပါတယ်; မိုဘိုင်းအမျိုးအစားကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ Multi-rowning type (tunnel type) နှင့်တစ် ဦး တည်းသောစစ်ဆင်ရေး (Cableway type) ။ ခြောက်သွေ့သောခေါက်ဆွဲများ၏အစိုဓာတ်ပြုခြင်းသည်အတော်အတန်ဆင်းရဲသည်။ ထို့ကြောင့်ခြောက်သွေ့ခန်းမှထွက်လာသောခေါက်ဆွဲများအတွင်းအစိုဓာတ်နှင့်အပူလွှဲပြောင်းခြင်းရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားမည်မဟုတ်သော်လည်းခေါက်ဆွဲအပြင်ဘက်ရှိအပြင်ဘက်အလွှာများ၏အပူချိန်အပူချိန်ကိုတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်သျှူးပုံသဏ္ fixed ာန် fixed လိမ့်မည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းခြောက်သွေ့သောခေါက်ဆွဲများကိုနှေးကွေးစွာချက်ပြုတ်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ နှေးကွေးသောအချိန်သည် 12 နာရီထက်မနည်းစေသင့်ပါ။ Twsix Noodle dryer သည်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်
700kg သည်ငါးခြောက်စက်ခြောက်သွေ့သော Sardines Dhyoldrator ခြောက်သွေ့သောငါးမီးဖိုချောင်သုံး dhg080s-x ပေးသွင်းသူ
စီးပွားဖြစ်ငါးခြောက်စက်။ရိုးရာခြောက်သွေ့သောငါးများသည်မကြာခဏ 5-7days သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြာသည်။လေထုအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်သည်ခြောက်သွေ့သောအချိန်ကိုတိုစေပြီးခြောက်သွေ့သောငါးအရည်အသွေးကိုအာမခံနိုင်သည့်ခြောက်သွေ့သောငါးများသို့လည်းသင့်တော်သောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။Twesix အကောင်းဆုံး 700kg freeze ငါးခြောက်သွေ့သောငါးခြောက်ခြောက်ခြောက်ခြောက်ခြောက်ခြောက်ခြောက်ခြောက်ခြောက် dphg080s-x ပေးသွင်း, စက်ရုံ, oad / odm အမိန့်